Izvozvo Zvichaita Sei Vinyl Fence Ive Mumangwana. - bestpvcfence.com
Izvozvo Zvichaita Sei Vinyl Fence Ive Mumangwana.
vinyl fence vs huni Nhoroondo yaro yakareba, maitiro ake akawanda, uye hutano hwavo, huni kamwe chete hwakatongerwa mumusika wechenzi. Zvisinei, mazuva ano zvinofanira kukwikwidzana nezvinhu zvekugadzirwa kwezvinhu zvekugadzirwa kwezvinhu, izvo zvakati zvishoma zvinopa zvipo zvakasiyana-siyana pamutengo wakaisvonaka. naizvozvo World Health Organisheni inogona kunge ichirwisana nehuni? Vinyl, ndiyani! kutanga kuiswa mukati megumi nemakumi masere Eigh ...
Nehupenyu hwayo refu, hutsika hwakasiyana-siyana, uye hutano hwahwo, huni hwakambove huchitungamirirwa nemusika wechenzi. Zvisinei, mazuva ano zvinofanira kukwikwidzana nezvinhu zvekugadzirwa kwezvinhu zvekugadzirwa kwezvinhu, izvo zvakati zvishoma zvinopa zvipo zvakasiyana-siyana pamutengo wakaisvonaka. naizvozvo World Health Organisheni inogona kunge ichirwisana nehuni? Vinyl, ndiyani! kutanga kuiswa mukati meVanegumi nemakumi mapfumbamwe makumi masere, vinyl fencing inotora nguva yakareba kudarika huni, inoda kungoita pasina yekugadzirisa, uye haichazoparadzwi nemasango evhuni (termites, fungus, yakaoma yakaora, uye moto). Zvisinei, vinyl yakangoita kupfuura miti. saka iwe unofanirwa kusarudza kana iwe uchizovaka fenzi yekutsvaga: huni kana vinyl? Tichavaka foni yako kubata nyore nyore ne indentation wood vs. vinyl fence mumutambo wakanyanya kusvika kumusoro.
Kunyange huni huchagara makore anenge makumi maviri, ichapedza nguva uye iwe ungafanirwa kugadzirisa nekugadzirisa matanda emipendero. rudzi rwehuni runogona kuva nemigumisiro kune chigadziro chechigadzirwa muzvimwewo, sezvimwe zvipenyu zvehuni zvinowedzera zvakagadzikana uye zvinopesana nezvokuora nekuora (cedar uye redwood zvakanakisisa). Kana iwe uchida kuti huni dzako dzigare kwenguva yakati, iwe unogona kuisa mari mukati mekunetseka-kurapwa uye kurapwa kwemakemikari, uye iwe unofanirwa kushandisa kuchengetedza sealer. Idambudziko rakadini! ramba uchishandisa vinyl kana iwe uchida firati yakasimba, yakasingaperi.
Mhando dzePVC Fencing
Izvo zviviri zvine maitiro akafanana, zvisinei kuti kune zvimwe zvakasiyana asi zvakadaro.
Mhandara Vinyl PVC ndeyekuti chinowanzogadziriswa nehupfumi nemakambani. Yakasikwa zvikurukuru yePVC, uye plastiki, nylon, uye polythene.
Kunyange zvazvo inoratidzika seurongwa hwakanakisisa hwokutenga uroyi hunogadzirwa kubva kune zvinhu zvepurasitiki zvakashandurwa, chokwadi ndechokuti kutengesa kunopedzisa kuve kwakaderera kune mhandara vinyl imomo inenge yakagadzirirwa kuva mutsa wekunwa neyevhu. Icho chikamu semagumisiro ekuti dzimwe sangano dzinoita kuti "dzigadziriswe" zvishandiso, dzichava nezvinhu zvisina kuchena izvo zvingava nemigumisiro pane zvakagadzirwa zvekugadzirisa kwekugadzirisa, kusagadzikana kwekukanganisa, uye unhu husingachinji hwehu.
Nzira Yokutaurira kuti PVC chivakwa chekuvaka ndicho icho
Zvinotyisa kuzivisa kusiyanisa pakati pemhandara nekudzokorora vinyl PVC nekungoona chirabwe, icho chave chitsva, tarisa zvakafanana.
Mhandara vinyl PVC inenge yakaoma kupfuura iyo yakashandurwa zvakare. Uyewo, yakawanda yakashandurwa zvakare vinyl PVC rusvingo inouya muzvikwata zvekutanga zvisati zvaungana. mukutenda kwakanakisisa kuvonga kuudza kusiyana ndiko kungosimudza mupiro kana kuti kwete chivara chacho chiri mhandara kana kushandiswa zvakare.
Chimwe chezvikonzero zvakanyanya zvekuwedzera kwayo inofanira kuita nekuchengetedza, kana zvakawanda zvakajeka, chokwadi chaicho kuti chinhu chaicho chisina kuchengetedza. Ndiyo huru yakawanda yekushanda, vakashanda zvakaoma veAmerica avo vangasada kuisa chero ipi yeipi yavo yakasununguka nguva yekusunungurwa kana
kugadzirisa kuderera, kuongorora, kana kuti kuvhara fence.
Zvakanakira PVC Fencing
Vanhu vazhinji vanotaura pamusoro pezvivako zveVivl PVC nokuti "kusununguka kusina" mamwe maitiro. Izvozvo zvakaita semuenzaniso kune zvakawanda zvakakosha pakusarudza PVC rusvingo pamusoro pehuni kana masvingo esimbi:
Haazoregi kana kuora sehuni kunogona, kuvasika kune imwe nzira yakatendeseka kune nzvimbo dzine mhepo yakanyanyisa sezvinoita mhepo yakasimba kana mvura. Izvo zvinowedzera hazvisi pangozi yemigumo, kudai chaizvoizvo hakushandisi pamatanda emiti. Pane kuwedzera hakuna ngozi yezvipuka kana kupisa sezvakaitwa nesimbi kana kuti atomic nhamba 26 fence. Chaizvoizvo, i "hutsvina-uchapupu" zvinhu!
Vinyl fencing i-UV-resistant uye haichazoperi kana kuti "inoda" mumasikati masikati.
Vane mhuri-vane ushamwari (hapana makemikari anonyangadza) uye nyika-yakanaka sezvo ichinyatsogadziriswa!
Hapana mungozi yekuputsa, izvo zvinoita kuti vinyl PVC cheni rive nehutano hwemwana zvakasiyana nehuni hwehuni.
Havadi kutengesa kana kuveza, uye ari nyore kusvina ne sopo chete nemvura.
A vinyl PVC fence inenge inopetwa kahlanu pane yakasangana nayo.
Vinyl PVC inogona kuva chinhu chakakwirira chekuvhara mhuka kubva mhuka dzisingatambudzi ivo pachavo kana dzichiedza kuritsva, kana kuzvikuvadza kana dzichiedza uye dzichifamba nadzo.
Vinyl PVC rusvingo inowanzove pamusika mune mavara akasiyana-siyana, saka kuenzanisa iyo neimba yako kana nzvimbo yako yakakomberedzwa, ndeye CHITSAUKO chakasununguka kana uchichida.
Ndiyo imwe nzira ine mari-inoshanda. Mutengo wekutengesa kwevhaini yepVC PVC ndeyokutanga kutenga huni kana simbi yerimbi, zvisinei nokuti haifaniri kupera, kushatisa kana kusina mvura, iwe uchagadzirisa kwenguva. (Uye nguva panguva ino inoratidza kuti inowedzera nguva yako! Kubhadhara mitengo yepamusoro pamakore ose, uye inova pachena kuti vinyl PVC inonyanya kusarudza mari yekuchengetedza rusvingo sarudzo.) Zviri nyore zvakare kuti iite-it -kuda-iwe kuisa, izvo zvinoreva iwe uchaponesa mutengo wekubhadhara imwe nyanzvi yekudzivirira kambani yekugadzira vinyl yako
Zvinyorwa zveVivl PVC zviri pamusika mune zvakasiyana-siyana zvakagadziriswa zvakadai semakatoti, mararamiro, uye kunyange zvirongwa zvinotarisa dare rinoshongedza. iyo inoreva kuti inenge ipi zvayo chero huni hwehuni kana simbi fence inopindirana nePVC vinyl pamwe chete.
Kutenga Vinyl yako PVC Fence
Sezvambotaurwa kare, kana uri kuedza kuwana yakakwirira yevinyl PVC fence, inogona kunge yakarongeka yakarurama yekudzivisa "big-box" zvipo zvinotengeswa, izvo zvinowanzove zvakaderera maererano nehutano. Kana iwe uri kuda kuisa fence yako iwe pachako, fungisisa zvekutengesa kubva kune imwe kambani inotakura inotungamira kubva kune mugadziri, saka mutengo we "middleman" kana kuti mutengesi wekutengesa uri kuda kuparadzwa.
Kunze Kwekunze Muchengetedzo Fence Inoderedza Noise
Kana iwe ukagara muzere nehupenyu hwehupenyu, uye iwe unoda kuti iwe usati wamboita, kunze kwemasvingo fence inopa nzira yakarurama yekuvhara. Nzvimbo dzekuchengetedza zvidzidzo dzichashanda zvipingamupinyi zvinogona kuita kuti ruzha rwekuvakwa kana kuti vavakidzani vanoridzika vachifambidzana pamwe chete nemafungiro emvura.
Chimbofungidzira pakupedzisira kuwana rugare nerunyararo kamwe chete makore ekutaura nezvekrisophony yemanzwi kubva kune zvakasara zvemuvakidzani. Iyo mukati uye pachayo mutengo isarudzo yeFencing Direct.
Kunze Kwekuchengetedzwa Kwekunze Fence Inodzivirira Vadiwa
Kana uine vana vaduku kana zvipfuwo zvekudenga, hapana chikonzero chakakwirira chekuona kuti vanogara mukati memuzinda wako kunze kwekunze kwepanda fence.
Uine jeri rakagadziriswa, iwe uchakwanisa kurega vechidiki vachiridza kunze kunze kwekuti varege kuomesa kuti vangangodzungaira.
Icho chinotora mapfupa asi zvakadaro. iwe unoda kusafambisa jam imbwa nekunze kunze fence yakadzivirira iyo. uye sezvo vinyl masvingo akachengetedza kupfuura huni, haufaniri kunetseka nezviduku zviduku zvemitambo kana zvipfigiro mufence rako.
Iwe unogona kufunga kuti kuvaka kunze kunze kwepanda fence kunogona kuva chinhu chakakura, zvisinei iwe unenge usina kunyanganisa zvachose. iwe uchakwanisa kuisa mukati mukati pekupera kwevhiki kune vamwe vanoshumira nemaoko uye maonero mashomanana edzidzo dzedu mavhidhiyo.
Iwe unogona kuchengetedza hukuru kuburikidza nekuisa munharaunda yega yega pachinzvimbo chekubhadhara vashandi vakakwana kuedza nekukuitira iwe. Uye kana iwe uchiziva kunyange zvakadaro inoshanda, uchakwanisa kugadzirisa nekugadzirisa iwe pachako!
Kana iwe uchifunga kuti kunze kwepanda fence yakakosha iwe, ita rimwe kubva kuFencing Direct! isu tinopa hupfumi husununguko pane vinyl merchandise.
Paunopa pfungwa dzako kune danda rako, iwe unoda kuva nechokwadi chekutsvaga chigadzirwa chakanaka kuti chienderana nemanzwiro ako. kunyange zvakadaro iwe unofunga zvakare unoda chimwe chinhu chiri kushanyira chitarisiko chakanaka pamwe neimba yako. zvisinganzwisisiki, tine mashoko anonzwisisika: AN metallic element fence inogona kuita izvo chaizvo uye mune zvimwe kupfuura nzira.
Uroyi hausi kungoona zvakanaka; iyo inowedzera inoshandisa chinangwa chokuparadzanisa zvishoma. kunyanya kana iwe uri kuedza kuwana iyo kuparadzana asi usingatsvaki kuisa kunze kwecheni chekuvhara fence, ipapo metallic element chipambo chisarudzo chinoshamisa.
Aluminium fence inowanzogadzira chimiro chakanaka uye chirevo cheimba yako kana chivako, asi kwenguva refu (uye inoda kushandiswa zvishoma) pane dzimwe nzira dzehuni.
Zvinonzwisisika, chero nguva iwe uri kuedza kuwana danda, nyaya yeimba yako ichaita uye inogona kutamba basa rakaoma. kunyanya kana iwe usingararami kuti utaure nyaya yacho zvachose pasi. pfungwa yekuisa mufambo iyo inogona kutarisa kunzwisisika pamhepo inotyisa inotyisa. asi nesimbi metal element uroyi, haisi nyaya.
Zvose zvedu zvesimbi metal element masvingo ane rusvingo rwekudzivirira, izvo zvinoreva kuti zvichagadziriswa kutevedzana nematope enyika yako. semugumisiro wekuti haisi parallelogram yakaiswa, fence yako inogona kumhanya isina chimiro pamusoro pemitenha yepfuma yako kana isingaiti CHINHU chisina kukwana. Izvi zvinodzivisa kusingazivi kutenderera fence yako kuUkuvadza, zvisinei kunyanya kukosha kana iwe uchida kudzivisa kuita zvinhu zvinogona kuita kuti mhuka dzesango dzinoita kuti dzibudise kunze.
Kutenga yakarurama yesimbi metal element pvc Fence
Zvechokwadi, hapana imwechete yesimbi metal element fence inofanana nezvinhu zvose. vanhu vakasiyana zvachose vane zvinodiwa zvakasiyana, ANd iwe unenge uchida kutsvaga chisarudzo chingaita kuti uwedzere imba yako. Nenguva isipi, nyaya iyi inoshanda nemhando ipi neipi yemusha, asi isinganyengeri chitarisiko chayo. Zvechokwadi, metallic element fences ichashanda zvakanaka ne peninsula, unyanzvi hwekugadzira, hutongi hwemakore, pakati pezana remakore remakore, kana mhizha dzemagetsi.
Vadzidzisi vemisha vane chimiro chakanaka pane dzimwe nguva vanowedzera kusvika kune fambo nemitsara yakajeka yakachena. iyo mhaka, iyo printer metallic element Fence mualloy yaizova imwe yakakodzera. iwe uchakwanisa kusarudza mararamiro azvino, kunyange zvakadaro fence iyi inonyanya kumira nekuda kwaro nyore. Chinangwa rakagadzirirwa asi chisati chave chiitiko chakanakisisa chemashoko, rinoita kuti imba yako igone kugara pachigadziko chepfuma uye naizvozvo fence inoshanda seZVIMBO. Zvechokwadi, kana iwe usingadi shanduro, iri kuwedzera pamusika uri mutema.
Kana uri kuedza kuwana AN metallic element fence iyo inopindirana nekanyanyisa kazhinji kashandisi yemabasa, fungisisa Clearfield metallic element Fence mu Black. Icho chichiri masarudzo epamusoro chechitima ichienda kune yakakwirira, kunyange zvakadaro inowedzera zvishoma zvakawanda. Mapapetti akasiyana-siyana anosangana nekodzero, iyo inopa feni iyi yekare, kuonekwa kwakasiyana. Ichokwadi, izvi zvinopedzisira zvinogadzira AN chiitiko chinonakidza chinoita kuti fence yako ive chido. Iyi fence inowedzera inowedzera, kana ruvara ruzhinji rwakabatanidzwa pamwe chete newaini yako neimba yako.
Muchisarudzo ichi, sarudzo imwe neimwe yekupikisa inoratidzika pamusoro pepamusoro-soro, iyo inowedzera fence yekukurumidza. Kuratidzika kwaro kutarisa zvinowedzera kuwedzera kwaro. Izvozvo hazvina kungowedzera zvakanakisisa tsananguro kune fence, zvisinei hazvo zvinosungira kumasango akachengetedzeka evekare.
Pasinei nokuti uri kuvhara munharaunda yakawanda kuti ugare mhuka dzemhuka uye vaduku zvakachengeteka mukati, kupa chigadziro chedhuri mukati mejare, kana kuti unongoda kuparadzanisa yadhi yako nekuvandudza maitiro ayo, AN metallic element fence ichakupa mhinduro.
Uyezve, metallic element fences inopa nzvimbo pakati pemapiketti evanhu, izvo zvinoreva kuti iwe unongokwanisa kuita kuparadzana apo hausi kunzwa kwerusvingo rwechokwadi. kunyanya kana pfuma yako yakasarudzwa kana inodzokera kune rwizi, rwizi, gungwa, kana kuti zvichida mhepo, iwe uchakwanisa kuwana mufaro kubva mukuverenga kwakanaka.
Hazvina mhosva kuti iwe wakasarudza feni yakadini, iwe uchakwanisa kuvimba kuti ruvara runopedzisira rwuripo kwenguva yakareba nekuda kwekushanya kuputika panzvimbo yepara. vane chido chekudzoka nenguva yenguva yekusimbiswa kana mavimbiso makumi emakore apfuura, vachiita kuti vave muUNYIKA, kushandiswa kwenguva refu.
Kana ukangosarudza feni yakakodzera kuti ienderane netsika yako, mararamiro, uye zvinoda, saka inongova nyaya yekuraira kuwanda kwakakwana uye kuisa mairi. kuti uite iyo nzira yakatanga kana yawana fense yezviroto zvako, tapota taura neUnited States.